Firenena Latsaka An-katerena Mandritra ny 30 Andro Ny Vondro-Nosy Maldives, Mihantona Ny Zo Fototra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Novambra 2015 16:19 GMT
Tamin'ny volana Novambra teo amin'ny mitataovovonana tao Maldives (07:00 GMT), nanambara ny firenena ho latsaka an-katerena 30 andro ny governemanta ao amin'ity fanjakana nosy kely ity, noho ny fandrahonana ny fiarovam-pirenena sy ny filaminam-bahoaka no antony voalaza. Nivoaka ny fanambarana rehefa nahita fitaovana mety mipoaka tampoka maromaro (IEDs) sy fitaovam-piadiana tao amin'ny toerana samihafa tao an-drenivohitra Malé ny mpitandro ny filaminana .
Tsy hisy ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina, saingy miato kosa ny fahalalahana hamory olona, ny zo hanana fiainana manokana, ny zo hitokona, ireo zo manoloana ny fisamborana sy ny fanagadrana, ny fahafahana tsy ho savasavaina sy anaovana fanagiazana ary koa ireo zo hafa sasany. Araka ny tatitry ny gazety UK the Guardian, nangina ny araben'i Malé taorian'ny fanambarana, ary voahodidina miaramila ny orinasa mpamokatra rano sy herinaratra. Maro ny olona voasambotra nandritra ny fisafoana.
Namoaka fanambarana tao amin'ny tranokalany ny filoha lefitry ny firenena, izay ao anatin'ny andro faha-11 tsy mahazo mihetsika mivoaka ny fonja ao Dhonidhoo, nilaza ny ahiahiny momba ny toe-draharaha ara-piarovana izy ary nilaza fa hanimba ny hoavin'ny toekarena ao amin'ny firenena ny filazana ny firenena ho latsaka an-katerena
Nikasa hanao fihetsiketsehana goavana ao an-drenivohitra antsoina hoe ‘Minjuvaan ny mpanohitra voalohany Antoko Demokratika Maldiviana (MDP) amin'ny Zoma 6 Novambra. Any am-ponja ny filoha teo aloha Mohamed Rasheed, filohan'ny MDP taorian'ny fiampangana azy tamin'ny volana Martsa teo ambanin'ny lalàna manohitra ny fampihorohoroana. Hanome fahefana mihoa-pampana ho an'ny mpitandro ny filaminana ny firenena latsaka an-katerena mba hisambotra ireo olona ahiahiana alohan'ny fihetsiketsehana anti-governemanta .
Nanomboka teraka tao amin'ny firenena ny disadisa taorian'ny fipoahana tao amin'ny sambo mandeha motera an'ny Filoha Abdulla Yameen tamin'ny Septambra 28, izay namparatra ny vadiny sy ny olona roa hafa. Tsy naninona i Yameen satria tsy nipetraka tao amin'ny toerana mahazatra azy ao anatin'ilay sambo. Vao haingana ny FBI no nanohitra ny fanadihadian'ny mpanao famotorona hafa ary nilaza fa tsy nahita porofo izy ireo amin'ny fisian'ny fipoahana tao amin'ny sambon'ny filoha.
Nanoratra tao amin'ny Facebook mikasika ny fiantraikan'ny firenena latsaka an-katerena eo amin'ny zon'ny vahoaka ao Maldives i Saina Saeed :
Raha nitaraina kosa i Zaeem Ahmed: